အဆိုပါပင်လယ်ရန်ဒေသတွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်း -6နေ့5ညအားဖြင့်လမ်းမကြီး - Superior
Sketch နှင့်အတူ Created ။
အကောင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ e-mail လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏စကားဝှက်ကို reset ဖို့ link ကို email ပို့ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ကျောမှာတော့ Log မှ
နေအိမ်များ & အငှားဌာနများ
လမ်းအားဖြင့်6နေ့က5ညဥ့် - - Superior ပင်လယ်ဒေသတွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ
မှ $ 773.00
Sketch နှင့်အတူ Created ။ Sa Pa, Lao Cai, ဗီယက်နမ်
6 နေ့ရက်များ5Nights
Group မှ Size ကို
နေ့ 1: ဟနွိုင်း Arrival (ဃ)
Noi Bai အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်, သင့်ဟိုတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ guide နှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ကြိုဆိုမှာရောက်ရှိ။
ဟနွိုင်းသို့မဟုတ်€œRiver-ခညျြနှောငျCityâ€â ?? ၎င်း၏အမည်ကိုစာသားဆိုလိုတယ်အဖြစ်ပြန် 1010 ဖို့ခြိနျးတှေ့တစျထောငျနှစ်အရွယ်သမိုင်းနှင့်အတူVietnamâ€™်မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ တမူထူးခြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောcityâ€™ s ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အလှအပ, ရှေးဟောင်းအိမ်၏ရှေးဟောင်းလမ်းများ, ကြော့ပြင်သစ်ကိုလိုနီအဆောက်အဦးများ, သစ်ပင်-စီတန်း Boulevard နှင့်ရင်ခုန်စရာရေကန်များကအာရှ၏အရှိဆုံးချစ်စရာကောင်းမြို့တဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ တစ်ဦးလူသိများတဲ့ local restaurant တွင်ကွိုဆိုညစာ။
နေရာထိုင်ခင်း: ဟနွိုင်းအတွက် | အစားအစာ: ညနေစာ
နေ့ 2: €âဟနွိုင်း "ဝက်နေ့ City Tour €â" ဒေသတွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ Â (ကားဖြင့်လွှဲပြောင်း) (B / L / D)
အဆိုပါမြို့ခရီးစဉ်ဟိုချီမင်းသည်nationâ€™ s ကိုတည်ထောင်သူ၏ဘဝတပ်ဆင်ထားသောဟိုချီမင်း Complex မှတစ်ဦးအလည်အပတ်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ , ကိုလိုနီခေတ်နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်နန်းတော်, မူလကပြင်သစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့်ဒဏ်ငွေ - ရှုပ်ထွေးမှာnationâ€™ s ကိုfounderâ€™ s ကိုယျခန်ဓာကို (နိုဝင်ဘာတနင်္လာနေ့, သောကြာနေ့နှင့်အောက်တိုဘာလကတဆင့်အပေါ်ပိတ်ပစ်) ထိန်းသိမ်းထားရာဟိုချီမင်းဂူဗိမာန်, သွားရောက်လည်ပတ် ဟနွိုင်းမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်ဗိသုကာများ၏ဥပမာများနှင့်ဟိုချီမင်းနေထိုင်ခဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာခြေတံရှည်ပေါ်ကျေးလက်စတိုင် Ho Chi Minhâ€™ s ကိုအိမ်သူအိမ်သား။ Hanoiâ€™ s ကို icon တွေကိုတ Bodhisattva Avalokiteshvara သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓသနားကြင်နာခြင်းနှင့်တစ်ဦးရေကန်ကနေမြင့်တက်နေတဲ့ကြာပန်းပွင့်၏ဆင်တူဖို့အပျနှံအတွက် 11th ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ထားတမဏ္ဏိုင်စေတီတော်ကရပ်တန့်။ ကွန်ဖြူးရှပ်, Sage နှင့်ထူးချွန်ဗီယက်နမ်ပညာရှင်များအားဂုဏ်ပြုသည့် Ly မင်းဆက်အားဖြင့် 1070 built-in ဗီယက်နမ်၏ပထမဦးဆုံးတက္ကသိုလ်အဖြစ်လူသိများစာပေ၏ဗိမာနျတျောမှ Continue ။ တစ်ဦးလူသိများတဲ့ local restaurant တွင်နေ့လည်စာ။
နေ့လယ်, ဒေသတွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကုန်းမြို့, ငါတို့၏ guide နှင့်လွှဲပြောင်း။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်အရှည်ကြာဆုံးနှင့်အများဆုံးခေတ်မီအကြီးဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်သောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှတဆင့်သွားပါ။5နာရီလွှဲပြောင်းပြီးနောက်ဒေသတွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှကိုရောက်ရှိ, လျှော့ပေါ့ဘို့ဟိုတယ်ထဲမှာစစ်ဆေးပါ။ တစ်ဦးလူသိများတဲ့ local restaurant တွင်ညစာ။
နေရာထိုင်ခင်း: ဒေသတွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် | အစားအစာ: နံနက်စာ, နေ့လည်စာ, ညနေစာ
နေ့ 3: FULL နေ့ LAO Chai â€ "က TA Van တဲ့€" Giang က TA Chai (B / L / D)
နံနက်, လာအိုချိုင်ရွာ, အက Black အဘိဓါန် Hmong တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုလူမျိုး၏တစ်အခြေချဖို့သာယာလှပရှုခင်းကတဆင့်လွှဲပြောင်း။ အဓိကလမ်းမကြီးပေါ်တစ်ဦးထက်အပေါ်စီး မှနေ. သင်ရွာက၎င်း၏စွန်းတဦးတည်းမှာ Muong အဘိဓါန် Hoa တွင်ချိုင့်ဝှမ်း၌တရားတည်ရှိသောတောင်များကကျောထောက်နောက်ခံပြုနေတဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ရှုထောဖမ်းနိုင်ပါတယ်။ မျက်မှောက်လယ်ကွင်းကိုခံစားစီးနှင့်ဧညျ့ကျေးရွာသားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်။ ကျန်ကြွင်းသောအရပ်စပါးလယ်ကွင်းများ၏လှိုင်းအတက်အကျခါးဆစ်ခြင်းဖြင့်နှုတ်ဆက်ပြီးမှကျေးလက်အိမ်များပြွတ်ဖြစ်သော Ta ဗန်ရွာ4ကီလိုမီတာအကြောင်းကို trekking အားဖြင့် Continue ။ ဤနေရာတွင်ရွာသားgiấyတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုကလူ, သာဗီယက်နမ်၏မြောက်ပိုင်းကုန်းသားသေးငယ်တဲ့အုပ်စုတစုရှိပါတယ်။ တစ်ချိုး ယူ. ဒေသခံတစ်ဦးအိမ်ထောင်စုအတွက်ဒဏ်ငွေနေ့လယ်စာရှိသည်။
နေ့လယ်စာပြီးနောက်တောင်ကုန်းကျော်နှင့်ဝါးသစ်တောမှတဆင့်3ကီလိုမီတာဘို့ခွ။ , Giang Ta ချိုင်ရွာမဝင်ခင်ဒုံ Dao တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုလူများအိမ်မှာအနားယူနေတဲ့ရေတံခွန်မှာရပ်တန့်။ ရွာ Explore နဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုများတွင်ရွာသားကိုစောင့်ရှောက်မည်။ သငျသညျထကောက်ယူနှင့်ကားတစ်စီးအားဖြင့် Sa Pa မှပြန်လာပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးလူသိများတဲ့ local restaurant တွင်ညစာ။
နေ့ 4: နောက်သို့ဟနွိုင်းတစ်ဝက်နေ့ Silver ရေတံခွန် & HEAVENâ€™ S ကို GATE €â "လွှဲပြောင်း (B / L / D)
တစ်ဦးက 30 မိနစ် drive ကိုငွေရေတံခွန် (အကောင်းဆုံးနိုဝင်ဘာလမှမေလမှမိုးရာသီတွင်တွေ့မြင်) ကိုသငျသညျကြာ, ကြီးသောအမြင်များပတျဝနျးကငျြတောင်များနှင့် Hoang Lien အမျိုးသားဥယျာဉ်၏စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့သစ်တောတွေကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်ရှိရာရေတံခွန်မှတိုတောင်းတဲ့လမ်းလျှောက်ယူပါ။ လမ်းတစ်လျှောက်ကသင်၏လမ်းညွှန်အများအပြားသစ်ပင်မျိုးစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဇီးသီးနှင့်မက်မွန်သစ်ပင်များအဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသည်ရှိရာ Sa Pa ၏ဒီအထူးစိတျအပိုငျးမြားအကွောငျးကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီကနေသင်တို့ကို Fansipan တောင်€ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 10 မီတာအမြင့်မှာIndochinaâ€™၏ ~the ခေါင်မိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်, ကောင်းကင်ဘုံရဲ့တံခါးမှတက်ကားတစ်စီး 3143 မိနစ် Continue ။ ဒေသခံတစ်ဦးစားသောက်ဆိုင် (ပင်လယ်စာ) မှာနေ့လည်စာ
နေ့လည်ခင်းပြန်ဟနွိုင်းမြို့သို့လွှဲပြောင်း, ဟိုတယ် & မစိုက်ရအတွက်စစ်ဆေးပါ။ တစ်ဦးလူသိများတဲ့ local restaurant တွင်ညစာ။
နေရာထိုင်ခင်း: ဟနွိုင်းအတွက် | အစားအစာ: နံနက်စာ, နေ့လည်စာ, ညနေစာ
နေ့ 5: â "€â HALONG" ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်€ဟနွိုင်း (B / L / D)
နံနက်ခန့် 160 ကီလိုမီတာသို့မဟုတ် 3.5 နာရီ drive ကိုပယ်ရှားသောအရာ Ha Long ကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှလွှဲပြောင်း။ လမျးခရီးတွင်, သငျသညျစပါးနယ်ပယ်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဗီယက်နမ်လယ်သမား၏ဓါတ်ပုံများကိုယူခွင့်အလမ်းတွေကို၏ပဒေသာနှင့်အတူအနီရောင်မြစ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အချို့ကျေးလက်ဒေသမြင်လိမ့်မည်။ နူးညံ့သောအဝတ်နှင့်ချယ်လှယ်သောပန်းချီကားများတစ်ဦးလက်မှုပညာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသွားရောက်တစ်ဝက်လမ်းကိုရပ်တန့်။ 11 လေးနှင့်ကြိုဆိုသောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်မှာရှိတဲ့ Junk ညာဘက်သင်္ဘောများတွင်စစ်ဆေး: 30 မှာ Ha Long ကစီးတီးအတွက်ရောက်ရှိ။ ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်နေ့လယ်စာရှိခြင်းနေချိန်မှာဒီလိုမြင်ကွင်း Start နှင့်အားကြီးသောပင်လယ်အော်အမြင်ပျော်မွေ့။ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခု Holly နဂါးကောင်းကင်ပြာမှဆင်းဆင်းသက်ရှိရာကဖြစ်ကြောင်းကိုရှိပါတယ်အဖြစ်ဗီယက်နမ်အတွက်သားစဉ်မြေးဆက်နဂါးဂလားပင်လယ်အော်အဓိပ်ပာယျ ha Long ကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်။ အဘယ်သူ၏ဖွဲ့စည်းရေး 500 နှစ်ပေါင်းသန်းကျောစတငျရသည့်worldâ€™ s ကိုအံ့ဘွယ်သောအမှုနှင့်အမွေအဆိုဒ်များတစ်ဦးအဖြစ်ကျော်ကြားပင်လယ်အော်, ပတ်ပတ်လည် 2,000 လှိုဏ်ကျွန်းများပါဝင်သည်နှင့် 1,553 km2 ၏ဧရိယာကျော်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြား islets ။ အဆိုပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခရုဇ် Dinh Huong ကျွန်းအထိနီးကပ်မျက်မှောက်, Ga Choi ကျွန်းခွေးကျွန်းရွက်ကျွန်း Titov သဲသောင်ပြင်မှာ Sung မဲဆောက်ဂူမှခရီးစဉ်နှင့်ရေကူးရပ်တန့်နှင့်အတူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ 09 ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တညဉ့်ကိုလွန်စေ: 00 မှာငါးမျှားသွားပါ, ပြီးနောက်ညစာရှိသည်, နေဝင်ချိန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အမြင်ပျော်မွေ့ဖို့ဖြေလျော့။
နေရာထိုင်ခင်း: Cruise တွင် | အစားအစာ: နံနက်စာ, နေ့လည်စာ, ညစာ (ပင်လယ်စာ)
နေ့ 6: €â HALONG "ဟနွိုင်း€â" Departure (မနက်လည်စာ)
06 မှာနိုးထ: 30 လေးနှင့် sundeck အပေါ်တစ်ဦး Tai Chi လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကို refresh ။ Tai Chi ကိုမကြာခဏပြည်တွင်းရေးသဟဇာတနှင့်အတက်ကြွမြှင့်တင်ရန်ပျော့နှင့်လျောက်ပတ်နှေးကွေးရွေ့လျားအတွက်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းပြည်တွင်းရေးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ onboard ခရီးစဉ်မှာနှင့်ရေကူးဖို့ Titov Islet သို့မဟုတ် Soi Sim ကျွန်းမှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီရှိသည်။
09 ပြန်ကမ်းဖို့ဒီလိုမြင်ကွင်းနေစဉ်ဘူဖေးမနက်လည်စာရှိသည်: 30 မှာထွက်စစ်ဆေးပါ။ 11 မှာပေါ်ကိုဆင်းသက်: 00 AM ထွက်ခွာဘို့ဟနွိုင်းအတွက် Noi Bai အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှလွှဲပြောင်းရန်
နေရာထိုင်ခင်း: အဘယ်သူမျှမ | အစားအစာ: မနက်လည်စာ
LanguageÂများအတွက် * တစ်ဝန်ပိုလမ်းညွှန်အမေရိကန် Speaking $ 15 / နေ့
** နှုန်းထားများ 20 ဒီဇင်ဘာ 2018 / 19 မှ 31 ဒီဇင်ဘာ 2018 / 19 ကနေအမြင့်ဆုံးရာသီအတွင်းလျှောက်ထားကြသည်မဟုတ်အထက်
ဘွတ်ကင်စင်မြင့်မှာအကြံပေး peak ရာသီဝန်ပိုနှင့်မသင်မနေရညစာ
ဘယျအရာပါဝင်သည်:တစ်ဦးတစ်ဦးအမွှာသို့မဟုတ်နေ့စဉ်နံနက်စာနှင့်အတူနှစ်ဆခန်း၌နေထိုင်ရန်, ရှိသမျှခရီးစဉ်နှင့်လွှဲပြောင်းစဉ်အတွင်းလမ်းညွှန်စကားပြောသည့်ခရီးစဉ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသော, ရှိသမျှခရီးစဉ်နှင့်လွှဲပြောင်းစဉ်ယာဉ်မောင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကလေအေးပေးစက်ယာဉ်န်ဆောင်မှုများ, အတွေ့အကြုံအင်္ဂလိပ်အဖြစ်အစားအစာများအပေါ်ဗီယက်နမ်ဗီဇာခွင့်ပြုချက်စာတစ်စောင် (ဗီဇာလိုအပ်သူကိုနိုင်ငံခြားသားများအတွက်) ဖြည့်စွတ်အပေါင်းတို့, လာရောက်လည်ပတ်သူအဘို့အဝင်ပေါက်အခကြေးငွေအဖြစ်ရောက်ရှိသည့်ခရီးစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်, သတ္တုရေဖြည့်စွတ်အဖြစ်ရရှိနိုင်
ဘယျအရာမပါဝင်:တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ & ပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်လက်မှတ်များ, အစားအစာအဆိုပါခရီးစဉ်အတွက်ကိုမသတ်မှတ်ထားပါလျှင်မူကား, လမ်းညွှန်များနှင့်ယာဉ်မောင်းများအတွက် Gratuities, ဗီဇာလေဆိပ်မှာအခကြေးငွေနေမှုကိုချေဖျက်, ခရီးသွားအာမခံ (ကြှနျုပျတို့အလွန်အမင်းသင်လုံလောက်သောအာမခံဝယ်ယူကြောင်းအကြံပြု), ထိုကဲ့သို့သောရေချိုးခန်း, တယ်လီဖုန်း, အဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်များ, အချိုရည်, စတာတွေဟာခရီးစဉ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်အားလုံးသည်အခြားဝန်ဆောင်မှုများ
Tour မူဝါဒ & မှတ်ချက်:
မိဘများနှင့်အတူ2နှစ်ရှိပြီခွဲဝေမှုတူညီအခန်းတစ်ခန်းကိုအောက်တွင်မွေးကင်းစကလေးတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
12 ADL နှင့်အတူ 1 yrs ဟောင်းခွဲဝေမှုတူညီအခန်းတစ်ခန်းကိုအောက်တွင်ကလေးသူငယ် 90% များအတွက်တရားစွဲဆိုထားသည်။
တစ်ဦးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိပ်ရာအတူဟောင်းနွမ်း yrs2ဟောင်းများကို 12 နှစ်ပေါင်းအထက်တွင်ကလေးသူငယ် 70% များအတွက်တရားစွဲဆိုထားသည်။
guide နှင့်ယာဉ်မောင်း (အကြံပြုချက်) အတွက်ဘောက်ဆူး:
€ "2 pax â4ကနေ Group မှ USD:5/ pax / နေ့
တစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ5/ pax / နေ့: € "9 pax â4ကနေ Group မှ
€ "10 pax â 15 ကနေ Group မှ USD:3/ pax / နေ့
15 pax အထက်တွင် Group မှ USD:2/ pax / နေ့
အခြေခံ0ပြန်လည်သုံးသပ်
စုစုပေါင်း 1 ၏0-0ဖေါ်ပြသည်
အသက်အရွယ် 18 +
Sketch နှင့်အတူ Created ။ ဧဝရက်တောင်
၁၂ ရက် Eve ၀ ရတ်တောင်ခြေစခန်းခရီး
Sketch နှင့်အတူ Created ။ မှ $ 945.00
Sketch နှင့်အတူ Created ။ လန်းတန်၊ နီပေါ
11 နေ့ရက်များနီပေါနိုင်ငံ Langtang Valley Trek
Sketch နှင့်အတူ Created ။ မှ $ 850.00
Sketch နှင့်အတူ Created ။ Annapurna အခြေစိုက်စခန်း၊ Ghandruk၊ နီပေါ
10 နေ့ရက်များ Ghandruk Ghorepani ခရီး
Sketch နှင့်အတူ Created ။ မှ $ 750.00
Sketch နှင့်အတူ Created ။ ခတ္တမန္ဒူ, နီပေါ
Sketch နှင့်အတူ Created ။ မှ $ 950.00
အပ်ဒိတ်များ & ပို Get
သင့်ရဲ့ inbox ရဲ့ရန်စဉ်းစားဟန်အတှေး
အပ်ဒိတ်များ & ကမ်းလှမ်းချက်များရယူပါ:
သင့်ရဲ့ E-mail ကိုလိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ:
* ကျနော်တို့ပမ် Send ဘယ်တော့မှမ
တစ်ဦး Host ကဖြစ်လာ
အားဖြင့်မူပိုင်ခွင့်© 2020 GlobalTripInfo
Sketch နှင့်အတူ Created ။ Google က
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်၎င်း၏တတိယပါတီကိရိယာများသည်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒတွင်ဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ရန်အတွက်၎င်းနှင့်၎င်း၏လည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သော cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ဤအသိပေးစာကိုပိတ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပယ်ချခြင်း၊ အချိတ်အဆက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခလုပ်တစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊Acceptကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ